Inyoka eqinileyo kwii-mobiles? Enkosi kwi-Metal Gear Solid: Special Ops | I-Androidsis
Ukubhiyozela Isikhumbuzo seminyaka engama-25 yesaga ye-Metal Gear Kwenzeke izolo, ezinye izimvo ezinomdla zivelisiwe kwaye ezinye zazo ziyingozi. Ifilimu yesaga, umzekelo, inokuvela kakuhle kodwa ukuba sithathela ingqalelo izinto ezichasayo zeefilimu ezisekwe kwimidlalo yevidiyo, izinto ziyeke ukupeyinta kakuhle. Siza kubona. Kwelinye icala, kwaye ukongeza kwi Izero zomhlaba, Yintoni enomdla kuthi yi-Metal Gear Solid: Special Ops, a umdlalo omtsha kuthotho olwenzelwe i-iOS kunye ne-Android.
Ulwazi malunga nalo mdlalo lunqabile kakhulu. Iphuhlisiwe ngeqonga laseJapan le-GREE engqondweni, iya kuthi ifikelele kwiiselfowuni. Iphuhliswe kunye ubunye Ngokupheleleyo kwi-3D, unokulindela umgangatho wegraphic ofanayo nalowo ubonwe ku-Walk Walker ngawo, onokuthi ube nawo, unonxibelelwano lwecebo. Ndifuna ngokwenene ukubona ukuba loluphi ulwalathiso oluthathwa yile fomati ukusukela, kuqala, kuyamangalisa ukubona uninzi lweentsomi zabalinganiswa kwi-saga kwi-logo efanayo. Kuya kufuneka silinde ukuze sazi ngakumbi ngayo yonke into ebonisiweyo.
Ulwazi oluthe kratya - kwibhanyabhanya yentsimbi yeGear, I-Metal Gear Solid: Iindawo ezingaphantsi komhlaba
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » I-Metal Gear Solid: I-Ops ekhethekileyo iza kwi-Android
Ibeka i-SOCIAL ops ...
Phendula ku Ukutshiza